Ungawakhipha kanjani ama-flavonoids namanye ama-phytochemicals - i-Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Ungawakhipha kanjani ama-flavonoids namanye ama-phytochemicals"
Ama-Flavonoids yiqembu lama-phytochemicals, abhekwa njengezakhi ezibalulekile ezondweni nasemithini. Njengama-metabolites wezitshalo, ayaziwa ukuthi anenzuzo empilweni ngokwenza njengama-antioxidants futhi abonise imiphumela yokulwa nokuvuvukala. Ngenxa yale miphumela enenzuzo yezempilo, ama-flavonoid asetshenziswa ekukhiqizeni okunempilo, okwenziwa emithi, okwelapha nasezimonyo. Ama-molecule we-Flavonoid atholakala ezinhlobonhlobo zezithelo, imifino, okusanhlamvu, izimpande, isiqu, amaqabunga, izimbali namagxolo.
Ukuze ucubungule ama-flavonoid njengezithasiselo ezinomsoco, izidakamizwa zemithi noma njengezithako ezisebenzayo ekudleni noma kwezimonyo, ama-flavonoid kufanele akhishwe ku-matrix yesitshalo yesitshalo. Ngakho-ke indlela enamandla, ephumelelayo nethembekile yokususa iyadingeka. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela engafanele yokuhlukanisa abantu, esetshenziswa ku-R&D kanye nomkhakha ukukhiqiza ikhwalithi ephezulu ye-flavonoid ekhishwe. Ukuba yindlela yokukhipha engeyona eyokushushuba, isizinda se-ultrasonic sivimba ukubola okushisayo kwezakhi ezibucayi bokushisa. Ngaphezu kwalokho, i-sonication yaziwa njengenqubo yokuqina, okuholela ekusebenzeni kahle kakhulu kanye namanani wokukhishwa, ukucubungula okusheshayo nokusebenza okuphephile. Izithasiselo ze-Ultrasonic zingaqhutshwa ngokukhethwa okubanzi kwama-sol solts, kufaka phakathi amanzi, i-ethanol, i-methanol, ukuxubana kwe-ethanol yamanzi, i-glycerine, uwoyela wemifino, i-heptane, i-hexane, isopropanol njll.
I-Hielscher Ultrasonic ngumlingani wakho wesikhathi eside onolwazi ngezinqubo zokukhishwa kwe-botanical kusuka kumincane kuye ngezinga elikhulu. Ukumboza uhla oluphelele lwezinhlelo ze-ultrasonic kusuka kubaphathi bezandla abaphethwe futhi bemi ngezinyawo kuma-processor ultrasonic ngokugcwele ekwelashweni okungaphakathi kwamanani amakhulu kakhulu, i-Hielscher Ultrasonics ingakunika idivaysi ephezulu ye-ultrasonic yenqubo yakho.
Funda kabanzi mayelana nezinzuzo zokukhipha i-flavonoids namanye ama-phytochemicals kusuka ezitshalweni!